Tag: zvemukati mashandiro | Martech Zone
Tag: zvemukati mashandiro
Nguva Yokuverenga: 3 maminitsi Nepo tekinoroji yekugonesa tekinoroji ichiratidzwa kuti inowedzera mari ne66%, makumi mapfumbamwe nematatu emakambani haasati ashandisa chikuva chekugonesa. Izvi zvinowanzo kukonzerwa nengano dzekutengesa chinogonesa chiri kudhura, chakaomarara kuendesa uye kuve nemitengo yakaderera yekutora. Tisati tapinda mune zvakanakira yekutengesa inogonesa chikuva uye nezvazvinoita, ngatitange tanyura mune izvo zvekutengesa zvinogonesa uye nei zvichikosha. Chii chinonzi Kugonesa Kugonesa? Sekureva kweForrester Kubvunza,
Nguva Yokuverenga: 3 maminitsi Kugutsikana kwekushambadzira zviripo zvakanyatsoratidzwa, kuburitsa 300% yakawanda inotungamira pamutengo wakaderera makumi matanhatu neshanu pane kudhura kwechinyakare, inoshuma DemandMetric. Hazvishamise kuti vashambadzi vane hunyanzvi vakachinjisa madhora avo kune zvemukati, nenzira hombe. Chipingamupinyi, zvisinei, ndechekuti yakanaka chunk yezvinyorwa (62%, muchokwadi) inonetsa kuwana, isina nhumbu kana kusakwezva kune vavanotarisira. Iri idambudziko rakakura. "Unogona kuve nezvakanakisa zvemukati menyika," zvakagovaniswa
Nguva Yokuverenga: <1 Mineti Mune ongororo nyowani yakatumirwa naKapost kubva kuAberdeen Boka, tsvagiridzo yakawana vashoma vashambadziri vanonzwa kuti vari kugadzira zvakakwana nekutevera zvirimo. Uye mukana unoshandiswa uri kubuda pakati pevatungamiriri vezvinyorwa uye vateveri vezviri mukati. Kapost inodaidza iyo nguva yekushanduka uko kudiwa kwakakwira asi kuronga kwakanaka kuri kushomeka Zvemukati Chaos. Vakagadzira iyo infographic pazasi yekuisa yakakosha zvipingamupinyi (uye mabhenefiti) kumisikidza yakanyatso gadziridzwa zvemukati mashandiro maitiro. Nezvose
Nguva Yokuverenga: <1 Mineti BlitzMetrics inopa yemagariro dhibhodhi iyo inoongorora yako data kune ako ese mageru uye zvigadzirwa munzvimbo imwechete. Hapana chikonzero chekutsvaga metric pane ese akasiyana mapuratifomu enharaunda. Iyo sisitimu inopa kupa kune vako vepamusoro vateveri uye vateveri kuti vakubatsire iwe kuvaka brand kuziva, kuita uye pakupedzisira - shanduko. Kupfuura zvese, BlitzMetrics inobatsira vatengesi kuti vanzwisise kuti ndezvipi uye ndezvipi zvirimo zvinonyanya kushanda kuitira kuti iwe ugone kugadzirisa yako mameseji zvinoenderana
Nguva Yokuverenga: 3 maminitsi Dzimwe nguva isu tinoita zvinhu nekuda kwekuti ndiyo nzira yakaitwa nayo. Hapana anoyeuka kuti sei chaizvo, asi isu tinoramba tichizviita… kunyangwe zvichitikuvadza. Pandinotarisa zvakajairika zvekutengesa uye zvekushambadzira zvemakambani azvino, chimiro hachina kuchinja kubvira patakatengesa vanhu vachisundira nzira uye vachidaidzira madhora. Mune mazhinji emakambani andakashanyira, "kutengesa" kwakawanda kuri kuitika padivi rekushambadzira remadziro. Kutengesa kunongotora